कोरोनाविरुद्ध २० लाख खोप तयार गरेको ट्रम्पको दाबी – Sadarline
काठमाण्डौ : अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरुसको संक्रमणबाट बच्नका लागि खोप तयार पारिएको दाबी गरेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणसँग बच्नका लागि अमेरिकाले २० लाख भ्याक्सिन तयार गरेको ट्रम्पले बताएका हुन् ।
उनले खोप प्रयोगका लागि तयार भएको दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उक्त खोप प्रयोग गर्नका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी हुने वैज्ञानिक निर्णयको प्रतीक्षा मात्र बाँकी रहेको ट्रम्पले बताए । खोप तयार भएपनि यसको प्रयोग सुरक्षित हुने पुष्टि भने गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
ठूलो रुपमा जनस्तरमा परीक्षणका लागि वैज्ञानिकको अनुमति कुरिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले उक्त खोप कुन कम्पनीबाट निर्मित भएको भन्ने पनि खुलाएका छैनन् । कुन समयसम्ममा यसको शुरुवात गरिने छ भन्ने पनि उनले कुनै समय बताएनन् ।
ट्रम्पलगत्तै बोलेका वरिष्ठ अमरीकी सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. एन्थनी फाउचीले भने राष्ट्रपतिले बोलेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएकाले यसबारे केही बताउन नसक्ने टिप्पणी गरे । यसअघि मंगलवार डा. फाउचीले नै एक मेडिकल सेमिनारमा आउने सालसम्ममा लाखौं खोप तयार हुनसक्ने बताएका थिए ।
अमरिकी प्रशासनले खोप तयार गर्न पाँच कम्पनीलाई काममा लगाएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । माडेर्ना, नोवावैक्स र फाइजरलगायतका औषधि कम्पनीहरु वैज्ञानिकको अनुमति पूर्व नै औषधि बनाउने होडमा जुटेका छन् । (एजेन्सी)
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : बाँकेमा चार जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । शनिवार दिँउसो खजुरास्थित शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रहेका संक्रमितहरुलाई घर पठाइएको हो । बाँकेको पहिलो कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार र प्रहरीसहित चार जना डिस्चार्ज भएको बताइएको छ । नेपालगञ्ज वडा नं. २ निवासी कोरोना संक्रमित […]